Nozzles Spray Guns အမျိုးမျိုး
Dayu Irrigation Group ၏ ပါတီအတွင်းရေးမှူး Wang Chong သည် Gansu ပြည်နယ် 14th ပါတီကွန်ဂရက်ကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။
မေလ ၂၇ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ၊ ၁၄ ကြိမ်မြောက် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ Gansu ပြည်နယ်ကွန်ဂရက်ကို Lanzhou တွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့သည်။Gansu ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၏လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးနှင့် Gansu ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Renzhenhe သည် အစည်းအဝေးကို သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။Gansu ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၏အတွင်းရေးမှူးနှင့် Gansu ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကွန်ဂရက်အမြဲတမ်းကော်မတီဒါရိုက်တာ Yinhong က "အတိတ်ကိုရှေ့ဆက်ပါ၊ ခေတ်သစ်ကြီးကိုရှေ့ဆက်ပါ၊ ပြည်သူကိုကြွယ်ဝစေ...
Inner Mongolia Hetao ဆည်မြောင်းဧရိယာ ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုဌာနနှင့် Dayu ရေချွေတာရေး အဖွဲ့တို့ မဟာဗျူဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မူဘောင်သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
admin မှ 22-06-11 ရက်နေ့တွင်
မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် Inner Mongolia Hetao ဆည်မြောင်းဧရိယာ ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာနှင့် Dayu ရေချွေတာရေး အဖွဲ့တို့သည် Bayannur City တွင် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။မဟာဗျူဟာစာချုပ်မူဘောင်သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသည် နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။Dayu ရေချွေတာရေးသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဆည်မြောင်းဧရိယာများ တည်ဆောက်ရာတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် "ပေါင်းစည်းမှု o...
Xi'an မြူနီစီပယ်ပါတီကော်မတီ၏ အမြဲတမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင် Lu Laisheng သည် Dayu Irrigation Group ဥက္ကဋ္ဌ Wang Haoyu နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် Dayu Water Group ဥက္ကဌ Wang Haoyu နှင့် အဖွဲ့သည် Xi'an မြူနီစီပယ်အစိုးရထံသို့ သွားရောက်၍ ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ပါသည်။Lu Laisheng၊ Xi'an မြူနီစီပယ်ပါတီကော်မတီ၏ အမြဲတမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် အမှုဆောင်ဒုတိယမြို့တော်ဝန်၊ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် Li Jiang၊ မြူနီစီပယ်အစိုးရလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Duan Zhongli၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင် ဒါရိုက်တာ Li Li Xining၊ ရေဗျူရိုမှ ဒါရိုက်တာ Dong Zhao မှ ဆွေးနွေးပွဲသို့ Xie Yong...
ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး He Lianghui သည် ယူနန်ပြည်နယ် အရည်အသွေးမြင့် ရေထိန်းသိမ်းမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဥက္ကဌ Wang Haoyu မှ Dayu ၏ “Yuanmou Mo...
2022 ခုနှစ် မတ်လ3ရက်နေ့တွင် ယူနန်ပြည်နယ် ရေထိန်းသိမ်းမှု အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်မြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေးကို ယူနန်ပြည်နယ် Yuanmou ခရိုင်၊ Chuxiong ခရိုင်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့၏ အရည်အသွေးမြင့် ရေထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအား အကျဉ်းချုံးပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။အရည်အသွေးမြင့်မားသော အတွေ့အကြုံများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ...
"Smart" လုပ်ဆောင်ချက်သည် Jinghai ခရိုင်၊ Tianjin ရှိ ကျေးလက်အိမ်တွင်း မိလ္လာသန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ကူညီပေးပါသည်။
admin မှ 22-02-16 ရက်နေ့တွင်
မကြာသေးမီက Tianjin ဒေသအချို့တွင် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည်။Jinghai ခရိုင်ရှိ ကျေးရွာများနှင့် မြို့များအားလုံးသည် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကို အားကောင်းစေပြီး လူများသွားလာမှုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားသောကြောင့် ကျေးလက်၏ မိလ္လာသန့်စင်ရေးစခန်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိခိုက်စေခဲ့သည်။ပရောဂျက်၏ မိလ္လာပိုက်လိုင်းကွန်ရက်နှင့် မိလ္လာသန့်စင်ရေး အဆောက်အအုံများ တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်နှင့် ညစ်ညမ်းသော ရေအရည်အသွေးကို လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ...
ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ Dayu Irrigation Group နှင့် Huawei Technologies Co., Ltd. တို့၏ Huaihe Water Conservancy Committee သည် Huaihe Digital Twin Strategic Cooperation Agreement ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
admin မှ 22-02-11 ရက်နေ့တွင်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ပါတီခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့၏အတွင်းရေးမှူးနှင့် Huaihe Water Conservancy Committee ဒါရိုက်တာ Liu Dongshun သည် Dayu Irrigation Group ဥက္ကဋ္ဌ Wang Haoyu နှင့် Huawei ၏ China Water Conservancy and Water Business Department ဥက္ကဌ Liu Shengjun တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခု။ဤအခြေခံပေါ်တွင် သုံးဖွဲ့လုံးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် အမွှာ Huaihe မြစ်တည်ဆောက်မှုကို ပူးတွဲမြှင့်တင်ရန်အတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် Huaihe Water...
Dayu Irrigation Group ၏ 2021 နှစ်ကုန် လုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် 2022 အစီအစဉ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
admin မှ 22-01-20 ရက်နေ့တွင်
ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်လုပ်ငန်းခွင် အကျဉ်းချုပ်နှင့် ချီးမွမ်းခြင်း အစည်းအဝေးနှင့် 2022 စီမံကိန်း လက်မှတ်ရေးထိုးရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ဤနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ "အကောင်းဆုံးစနစ်၊ အခိုင်မာဆုံးပုံစံ၊ အကောင်းဆုံးအသင်းနှင့် နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းပန်းတိုင်ကို ပြတ်သားစွာ ပြီးမြောက်ရန်" ဖြစ်သည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် နှစ်စဉ်အဆင့်မြင့်စုပေါင်း ၁၄၀ မှ အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ချီးမ...
"Yunnan Lulianghen Huba အလတ်စားဆည်မြောင်းခရိုင်စီမံကိန်း" "Dadi Heyuan Cup" ၏ 2021 ခုနှစ်တွင် အခြေခံလူတန်းစားရေထိန်းချုပ်မှုတွင် ထိပ်တန်းအတွေ့အကြုံဆယ်ခုထဲမှတစ်ခုအဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်
မကြာသေးမီက China Water Conservancy News သည် အောက်ခြေအဆင့် ရေထိန်းခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ ဆယ်ခုကို 2021 ခုနှစ် "Dadi Heyuan Cup" တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Dayu Water Saving မှ ဆောင်ရွက်သော Yunnan Lulianghenhuba အလတ်စား ဆည်မြောင်းဧရိယာ စီမံကိန်းကို အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ယူနန်ပြည်နယ်၊ Luliang ကောင်တီသည် Xianhuba ၏ အလတ်စား ဆည်မြောင်းဧရိယာရှိ လယ်ကွင်းရေပေးဝေရေး စက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင် ပါဝင်ရန် လူမှုရေးအရင်းအနှီးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။စု...
ကွန်မြူနစ်လူငယ်အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့က Dayu ဆည်မြောင်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Wang Haoyu အား 11 ကြိမ်မြောက် “တရုတ်လူငယ်များ ဝင်ရောက်...
2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 16 ရက်နေ့တွင် 11 ကြိမ်မြောက် "China Youth Entrepreneurship Award" ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို Anhui, Hefei ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ကွန်မြူနစ်လူငယ်အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့က Dayu Water Saving Group ဥက္ကဋ္ဌ Wang Haoyu အား "China Youth Entrepreneurship Award" ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။"တရုတ်လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်ဆု" ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဂုဏ်ပြုပွဲအား ကွန်မြူနစ်လူငယ်အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်း...
သမ္မတ Xie Yongsheng သည် ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၊ Guangxi ရေအရင်းအမြစ်ဌာနနှင့် Laibin မြို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တို့နှင့်အတူ Yu...
ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်က ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးရုံး၏ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Zhang Qingyong၊ Cao Shumin၊ ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန ဘက်စုံစီးပွားရေးဗျူရို၏ အင်ဂျင်နီယာချုပ်နှင့် ဘက်စုံစီးပွားရေးဗျူရို၏ ဒါရိုက်တာ Liu Jie၊ ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနသည် ကန်ထရိုက်ရေထိန်းသိမ်းမှုသုတေသနအဖွဲ့နှင့် Guangxi Water Conservancy Department Level2Investigator Ye Fan, Laibin City Government Depu...
Dayu “Yudi” နှင့် “Yuhui” စီးရီး IoT ထုတ်ကုန်များကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Dayu Water Conservation Group မှ သီးခြားထုတ်လုပ်ထားသော "Yudi" နှင့် "Yuhui" ထုတ်ကုန်စီးရီးများသည် ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးရေစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ပြီး လက်တွေ့ကျသော စမတ်ရေမီတာများနှင့် "ပညာ၊ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဒေတာ" ကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ရေအရင်းအမြစ်အဝေးထိန်းကိရိယာများဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ရုံသာမက အသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းမှာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး လှပပါသည်။အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။...
နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Dayu Water Saving Group ဥက္ကဋ္ဌ Wang Haoyu နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့သည် China Water Huaihe Planning and Design Research Co., Ltd. (ယနေ့ က Huaihe Committee Design Institute ဟုခေါ်သည်) သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။Huai Committee Design Institute Party အတွင်းရေးမှူး Zhou Hong၊ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Chen Biao နှင့် Shen Hong၊ စီမံကိန်းနှင့် လည်ပတ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး Qin Xiaoqiao၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ...